ဆွေးနွေးချက်:မြိုမင်းဆက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးဖန်တီးသူ(တို့) ဝီကီမှာလာပြီ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းအတွက် ဝင်ရောက်ရေးတာ/ပြင်တာ/ ဖျက်တာ/. . . သာမာန် အသုံးပြုသူ အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဝင်ရောက် မစွက်ဖက်လိုသော်လည်း ဆောင်းပါးများကို ဖြစ်သလို ဟိုနေရာက တိုက်ရိုက် copy, ဒီနေရာက copy တွေပေါင်းပြီး ဆောင်းပါး ရေးနေ( copy-paste) လုပ်နေသမျှတော့ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခု ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာသလို ဆောင်ပါးထိပ်မှာ ရှိတဲ့ Issue Template တွေလည်း ပြုတ်မသွားပါဘူး။ အကိုးကားဆိုရာမှာလည်း Online source ကို အမြဲတမ်း မတောင်းပေမယ့် Online Source ရှိခဲ့ရင် Admins တွေနဲ့ အခြား စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ရာ၊ ဖတ်မှာရာ အကူညီအများကြီးရပါတယ်။ စာရေးသားရာမှာ ဝီကီဖြစ်လို့ ဝီကီပုံစံအတိုင်းရေးဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ယခုလိုဆောင်းပါးမျိုးဆို enwiki ရဲ့ Pagan Kingdom (သို့) မြန်မာဝီကီ ပျူမြို့ပြနိုင်ငံများ များရေးသလို ပြုစုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာလည်း လိုအပ်ချက်ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေမယ့် ဖတ်ဖို့ လေ့လာဖို့ အတော်လေးကောင်းပြီး ရှင်းလင်းပါတယ်။ လက်ရှိ ဆောင်းပါးမှာ "ကုလားတန်၏ လှိိုင်းဂယက်တို့ကမူ ငွေသင်ဖြူ းအားလူးလွန်းလှုပ်ရှားစေလျက်ကမ်းပါးကို တဝေါဝေါရိုက်ခတ်စေ၏။တိတ်ဆိတ်သောည နှင့် ကုလားတန်၏ စည်းဝါးသံ။စာပေးစာယူ အနီးကပ်သင်တန်းပို့ချရန် စစ် တွေမြို့သို့ ရောက်နေသော ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်စုသည် . . . " ဒါမျိုးတွေဆိုရင် ဆောင်းပါးနဲ့ လုံးဝမဆီလျှော်တဲ့ စာသားတွေပါ။ ကျွန်တော် မြန်မာဝီကီမှာ ဘာသာပြန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ပြုစုပြီးရေးတဲ့ ဆောင်းပါ (၂)ပုဒ်၊ English Wiki မှာ (၂) ပုဒ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး (၂)ပတ်ကြာပါတယ်။ ပြန်ဖတ်ရင် ဟိုနားလို ဒီနားလိုနေတုန်းပါ။ ခက်ခဲတဲ့အတွက် အချိန်ပေးပြီး ရေးရင် ဒီထက်ပိုကောင်တဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်လာမယ်လို့ အကြံပြုရင်း လေးစားစွာဖြင့် Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၈:၃၉၊ ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)
(အကြံပြုခြင်း အတွက် ကျးဇူးတင်လျက်ပါ ။ ဤဆောင်းပါးသည် လူသိနည်းပါးပေမည် ၊ ဤဆောင်းကို ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပျောက်ကွယ်လုနီး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဟာကွက်များ ရှိနေပေမည် အားလုံးမှန်မည်လို့တော့မယူဆပါ။ ဤဆောင်းပါးအပေါ် ဝီကီ စံညွန်းနဲ့ညီ တည်းဖြတ် ပေးပါ ဆောင်းပါး အမှား ကိုမလိုလားပါ ။ လူသိနည်းလို့ မရေးကြသည်များလား Online Source မတွေ့ ရှိပါ ။Moyezan (ဆွေးနွေး) ၁၀:၁၅၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)
မှန်မယ်လို့ မယူဆဘူးဆိုရင် ထည့်မရေးသင့်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အပေါ်မှာ ပြောသလိုပဲ online source နဲ့ ကိုးကားပေးနိုင်ရင် review လုပ်တဲ့သူအတွက်လဲ တော်တော် အဆင်ပြေမှာပါ။ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ဖို့ဆိုတာ ပညာရှင်မဟုတ်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်က ခိုင်လုံတဲ့ ကိုးကားနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်မှပဲ ပြင်ဆင်ပေးလို့ရမှပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၃၀၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)
(ကိုးကားယူထားသော စာအုပ်များ အချို့ ကို Pdf file ထည့် ပေးထားပါပြီ ၊ ကျတော်တို့ ဆက်လက်လေ့လာကြမည်၊ဤ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခုလိုဆွေးပေးကြသော ဝီကီပီးယမ်း အဖွဲ့ အား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Moyezan (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၉၊ ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:မြိုမင်းဆက်&oldid=526299" မှ ရယူရန်
စာမျက်နှာ "မြိုမင်းဆက်" သို့ ပြန်သွားရန်။
၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။